ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ် ဖျက်ဆီးသူများ.. “၀ံသာနု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့” | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« သူတို့အတွက်၊ ငါတို့အတွက်
ရွေးကောက်ပွဲနီးမှ ရေငုတ်ပြီး ချီးပါသော NLD »
ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ် ဖျက်ဆီးသူများ.. “၀ံသာနု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့”
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှု၊ ဖြတ်သန်းရာ၊ ကျင်လည်ရာ ဘ၀တလျှောက်လုံးတွင် ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာသည် မည်မျှ အရေးပါအရာရောက်သနည်း ဆိုသည်ကို ပဲ့ပြင်ဆုံးမသွန်သင်မှု မရရှိခဲ့ကြသော သူတို့သည် ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရော ဆိုသည့် လမ်းကို လျှောက်ကြကုန်၏။ ထိုသူတို့ အတွက် အနာဂတ်သည် မည်သို့မျှ အဖတ်ဆည်၍ ရမည်မဟုတ်ပါ။
လူတိုင်း လူတိုင်းသည် ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ရေးကြရသည်။
မနေ့တနေ့က ရေဒီယိုမှာ “၀ံသာနု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့” အကြောင်း ကြားလိုက်ရတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ အမေရိကန်တင်သွင်းတဲ့ မြန်မာပြည်အရေး ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းကို ရုရှနဲ့တရုတ် ဗီတိုအာဏာနဲ့ ပယ်လိုက်တာကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ တရုတ်နဲ့ ရုရှကို ဂုဏ်ပြုချီးကျူးကြောင်း ကြေညာချက်ထွက်ကြတယ်။ သတင်းစာတွေထဲမှာလည်း ဖော်ပြကြတယ်။ ဒါ့အပြင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကိုလည်း ပုတ်ခတ်စော်ကားထားသေးတယ်။ ကိုယ့်အမေကို ကိုယ်ပြန်ဆဲနေတဲ့ သားကို အရပ်ထဲကပါ ၀ိုင်းဝန်းဆုံးမကြဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။ “၀ံသာနု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့” ကို ဦးဆောင်နေတဲ့သူကိုလည်း ကြည့်ပါဦး၊ ဒေါက်တာစိုးလင်းတဲ့။
၁၉၉၁ ဧပြီလရဲ့ နေ့တနေ့မှာ “ပုံစံ…” ငှက်ဆိုးထိုးသံ အသံကြီးကြားရတယ်။ “အားလုံးနောက်လှည့် ထိုင်ထား မယ်” တန်းစီး စိုးလေးရဲ့အသံပြဲကြီးကိုပါ တဆက်တည်းကြားနေရတယ်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ် စက်တင် ဘာလ ထောင်တွင်းတိုက်ပွဲများနောက်ပိုင်း ကျနော်တို့တိုက်ဝင်းထဲမှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို အလွန် ရက်ရက်စက်စက် နှိပ်ကွပ်ထားတယ်။ တနေ့လုံးကို (၁၀) မိနစ်လောက်ပဲ ရေချိုးဖို့ အခန်းပြင်ထွက်ရ တယ်။ ရေကန်ရှိတဲ့နေရာအထိ လမ်းလျှောက်ရတယ်။ အဲဒီအချိန်လေးမှာပဲ မြေကြီးနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရတယ်။ ကျန်တဲ့အချိန် တွေမှာ (၁၀) ပေပတ်လည် တိုက်ခန်းတွေထဲမှာ တနေကုန်ပိတ်လှောင်ထားတယ်။
“အေးဇေ …” အသံတွေငြိမ်သွားပြီ။ ၀န်ထမ်းတွေလည်း ပြန်ထွက်သွားကြပြီလို့ယူဆရတယ်။ ဘေးခန်း တွေကို ဘယ်သူတွေဝင်လာသလဲဆိုတာ သိပ်သိချင်နေတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း အခန်းနံရံကို တဒေါက် ဒေါက်နဲ့ခေါက်ပြီး အဆက်အသွယ်လုပ်တယ်။ ရာဇ၀တ်သားတွေလား၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလား ကွဲကွဲပြားပြားသိချင်လှပြီ။
ဘေးခန်းကလူတွေအားလုံး NLD အမတ်တွေချည့်ပဲ။ စင်ပြိုင်အစိုးရဖွဲ့ဖို့အတွက် Hard လိုင်း၊ Soft လိုင်း အထက်မြန်မာပြည်ကအမတ်တွေ မန္တလေးမှာစုပြီး အစည်းအဝေးလုပ်ကြတာ။ တောခိုဖို့ လူရွေးနေကြ တာ။ ခုတော့ တစုတစည်းထဲ အမတ်တွေအများကြီး တပြိုင်နက်တည်း အဖမ်းခံကြရတယ်။ နှမျောစရာ ကောင်းလိုက်တာ။ ကျနော်တို့ (၅) တိုက်ကလည်း သူပုန်တိုက်။ တောတွင်းဆက်သွယ်နဲ့ တောထဲက အပြန်မိတာနဲ့ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးနဲ့ ဆက်သွယ်နေတဲ့ UG, OG ကျောင်းသားလူငယ်တွေ များတယ်။
ယခုအခါ အထက်မြန်မာပြည်က စင်ပြိုင်အစိုးရဖွဲ့မယ့်အမတ်တွေ ကျနော်တို့တိုက်ထဲကို ထပ်ရောက်လာ ကြပြန်ပြီ။ (၅) တိုက် အခန်း (၁၃) မှာ ဦးဘပွား (အမရပူရမြို့နယ်အမတ်)၊ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် (အမရပူရမြို့နယ်အမတ်)၊ ဦးကျော်သွင် (ခရမ်းမြို့နယ်အမတ်)၊ ဦးသိန်းဖေ (ကန့်ဘလူမြို့နယ်အမတ်) လေးယောက်နေတယ်။ အခန်း (၁၁) မှာ ဦးမြ၀င်း (အင်္ဂပူမြို့နယ်အမတ်)၊ ဦးမြင့်ကြည် (ကသာမြို့နယ် အမတ်)၊ ဦးစောလှိုင် (အင်းတော်ကြီးမြို့နယ်အမတ်)၊ ဦးသောင်းမြင့် (ခေါ်) ကိုသံချောင်း (ခင်ဦးမြို့နယ် အမတ်)၊ သာဂရ ကိုထွန်းအောင် (ရေတာရှည်မြို့နယ်အမတ်) တို့ဖြစ်ကြသည်။ အခန်း (၈) မှာတော့ မကွေးတိုင်းစည်း ဦးချစ်တင် (အထက်မင်းလှအမတ်)၊ ဦးခင်မောင်သိန်း (ခင်ဦးမြို့နယ်အမတ်)၊ ဦးတင်အောင် (မန္တလေးအနောက်မြောက်မြို့နယ်အမတ်)၊ ဒေါက်တာစိုးလင်း (မန္တလေးအနောက်မြောက် မြို့နယ်အမတ်)၊ ဦးပိုက်ကို (ပခုက္ကူ NLD စည်းရုံးရေးမှူး)၊ ပြီးတော့ အခန်း (၅) မှာ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်ရန်အောင်၏သား ဒေါက်တာမောင်မောင်လတ် (ခေါ်) ဒေါက်တာလှိုင်ညီ (သာကေတမြို့နယ်အမတ်)၊ ဒေါက်တာမြင့်နိုင် (ကန့်ဘလူမြို့နယ်အမတ်)၊ ဦးလှသန်း (ကိုကိုးကျွန်းမြို့နယ်အမတ်)၊ ဦးလှထွန်း (ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် အမတ်)၊ ဦးသာဆိုင် (တွံတေးမြို့နယ်အမတ်) တို့ဖြစ်ကြတယ်။ (၄) တိုက်ဘက် မှာတော့ ဦးစောနိုင်းနိုင်း (ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်အမတ်)၊ NLD- CEC ဦးခင်မောင်ဆွေ (စမ်းချောင်းမြို့နယ် အမတ်)၊ ဦးအောင်ဆန်းမြင့် (မြိုင်မြို့နယ်အမတ်)၊ ဦးသိန်းထွန်း (ဇီးကုန်းမြို့နယ်အမတ်)၊ ဒေါက်တာ ဇော်မြင့် (ဟင်္သာတမြို့နယ်အမတ်)၊ ဦးရဲထွဋ် (ဒိုက်ဦးမြို့နယ်အမတ်)၊ ဦးစိန်လှဦး (အင်းစိန်မြို့နယ် အမတ်) နဲ့ ဦးဖေအောင်လင်း၊ ဦးတင်မောင်ဝင်း၊ ၀န်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစိန်ဝင်း၏ အောင်နိုင်ရေး စည်းရုံးရေးမှူး ပေါက်ခေါင်းက ဦးစောနေဒွန်း၊ မိန်းမထောင် တိုက်ထဲမှာလည်း ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်(၀က်လက်မြို့နယ်အမတ်)၊ ဒေါ်စန်းစန်း (ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်အမတ်)၊ ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း (အလုံမြို့နယ်အမတ်)၊ ဒေါ်အုန်းကြည် (မြစ်သားမြို့နယ်အမတ်)၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းစည်း ဒေါ်ဝင်းမေ၊ ဒေါ်ရွှေဝါစိုး စသည်ဖြင့် အမှုတွဲ စုစုပေါင်း (၃၅) ယောက်ရှိတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်တွေချည်းပဲ (၂၉) ယောက်ပါတယ်။ သည်လူတွေအားလုံးသာ မြန်မာပြည်အပြင်ဘက်ကို ရောက်အောင်သွားနိုင်ရင် ကုလသမဂ္ဂမှာ ယခင်မင်းသားကြီး သီဟာနုနေရာရသလို ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြု တရားဝင်အစိုးရဖြစ်မှာ။
သူတို့အမတ်အုပ်စုတွေထဲမှာ အသက်အကြီးဆုံးက အမရပူရအမတ်ဦးပွား (ခေါ်) အဘပွားဖြစ်တယ်။ NLD ဗဟိုကော်မတီဝင် ဦးချမ်းအေး (ခေါ်) စာရေးဆရာမောင်စူးစမ်းနဲ့ မဆလ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ထင်တို့နဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်တယ်။ ဂျပန်ခေတ်စစ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်း အသက် (၇၀) ကျော် အသားမဲမဲ ဒေါင်ကောင်းကောင်း အညာသား၊ ဥပဓိရုပ်နဲ့။ ဒါပေမယ့် ယက္ကန်းစက်ရုံတွေ အများကြီး ပိုင်တဲ့ သူဌေးကြီး။ စကားပြောရင် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ဘွင်းဘွင်းပြောတတ်တယ်။ သွယ်ဝိုက်လှည့်ပတ် မပြောတတ်ဘူး။ ဒဲ့ဒိုးကြီးပြောချတတ်တယ်။ ရင်ထဲမှာလည်း တေးမှတ်မထားတတ်ဘူး။ အမှတ်တကယ် ကို အလွန်ရိုးသားကြတဲ့ အညာသား၊ မန္တလေးသားစစ်ကြီးတွေ။ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ အသက်ရှင်ရပ်တည်နေတယ် ဆိုတဲ့သူတွေ၊ အလွန်ကို အရှက်အကြောက်ကြီးကြတယ်။ အထူးသဖြင့် သူတို့မန္တလေးမြို့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ကို အထိခိုက်မခံနိုင်ကြဘူး။ အခုလည်း စင်ပြိုင်အစိုးရဖွဲ့ဖို့ တောခိုဖို့အတွက် အထက်မြန်မာပြည် အစည်းအဝေးကို သူ့အိမ်မှာလုပ်တယ်။ လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကို လိုလေသေးမရှိ ဧည့်ဝတ် ကျေပွန်စွာ ဧည့်ခံကျွေးမွေးတယ်။ ဒါမှ မန္တလေးမြို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ မညှိုးနွမ်းရမှာဖြစ်တယ်။
သူတို့ အထက်မြန်မာပြည်အစည်းအဝေးတက်တဲ့သူတွေအားလုံးကို ထောက်လှမ်းရေးက တယောက် မကျန် အကုန်ဖမ်းတယ်။ ထောက်လှမ်းရေးစစ်ကြောရေးမှာ ဦးဘပွားကို အသေးစိတ်မေးတယ်။ သူ့အိမ်မှာ အစည်းအဝေးလုပ်တယ်ဆိုတော့ လူဘယ်နှစ်ယောက်လဲ၊ ဘယ်သူတွေပါလဲ စသည်ဖြင့် မေးခွန်းပေါင်း များစွာမှာ မန္တလေးသားတွေကလွဲရင် လူတွေနာမည်မသိဘူး၊ မမှတ်မိဘူး။ ဆွေးနွေးတဲ့ အကြောင်းအရာ တွေဆိုရင် သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်အရ ပိုပြီးငြင်းလို့ကောင်းတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ထောက်လှမ်းရေးမှာ ကတည်းက အစည်းအဝေးက ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၊ ဘယ်သူတွေက ဘာလုပ်မယ်၊ ဘာတာဝန်ယူမယ် စသည်ဖြင့် ပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးထားတဲ့ လက်ငါးလုံး လက်တ၀ါးစာလောက် စာရွက် အထပ်လိုက်ကြီးရှိတဲ့ ဖော်ကောင်ဒေါက်တာစိုးလင်းရဲ့ ထွက်ဆိုချက်မှတ်တမ်းကို သူ့ကိုလာပြတယ်။ ဘာငြင်းဦးမလဲမေးတော့ “ငါ -ိုးမသား၊ မအေ -ိုး စိုးလင်း၊ မျိုးမစစ်ကောင် သစ္စာဖောက်” မအေနှမစုံနေအောင်လို့ ထောက်လှမ်းရေးတွေရှေ့မှာတင် ဆဲပစ်လိုက်တယ်။ မန္တလေးသားရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိုခိုက်လို့ အလွန်ရှက်နေမိတယ်။ ဒေါသကလည်း အရမ်းထွက်နေတာပဲ။ အပြင်မှာသာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေ့လို့ကတော့ အသေကို သတ်ပြစ်မိမှာ။
အခုလည်း ထောင်ထဲမှာ ဦးဘပွားတို့ (၁၃) ခန်း ရေချိုးပြီးရင် ဒေါက်တာစိုးလင်းနေတဲ့ (၈) ခန်းကို ပိတ်ထားရတယ်။ စိုးလင်းကလည်း အခန်းထောင့်မှာပဲ အမြဲပုန်းနေရတယ်။ အခန်းအပေါက်ဝကနေ ဦးချစ်တင်၊ ဦးတင်အောင်၊ ဦးခင်မောင်သိန်းတို့က တယောက်မဟုတ် တယောက်ပိတ်ပြီး ထိုင်ပေး ထားရတယ်။ ဒါတောင်မှာ အဖိုးကြီးက နေ့တိုင်းအခန်းရှေ့လာပြီးဆဲတယ်။
“ဖော်ကောင် မအေ -ိုး စိုးလင်း၊ ငါ -ိုးမသား မျိုးမစစ်ကောင်”။ ဒေါက်တာစိုးလင်းရဲ့မိန်းမကလည်း ရှေးမြန်မာဘုရင်တွေလက်ထက် ကတည်းက ကိုယ်ရံတော် အထိန်းတော်မျိုးရိုးတွေက ဆင်းသက်လာတာ။ ဒါကြောင့် အိပ်ရာမ၀င်ခင် မိန်းမရှစ်ခိုးပြီးမှ အိပ်ရတဲ့ကောင် စံဆယ်ဖြာစိုးလင်းလို့ နောက်ပြောင်ခေါ်ကြတယ်။ စိုးလင်းထောင်ကျ နေတုန်း သူ့မိန်းမက မန္တလေးမှာနာမည်ကြီးတည်းခိုခန်းမှာ မန်နေဂျာလုပ်နေတယ်။ မန္တလေးမှာ “နေပြည်တော်” ရန်ကုန်မှာ “လေအေးသာ” ဆိုတာ ၀ါသနာပါသူတွေအတွက်တော့ လူတိုင်းသိတဲ့ နာမည်ကြီးတည်းခိုခန်းတွေပဲ။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်၊ စစ်သားတွေ၊ ကန်ထရိုက်၊ အရာရှိကြီးတွေ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူ ကြေးကြီးကြီးပေးပြီး ၀င်ထွက်နေတဲ့ဇိမ်ခန်းတွေပဲဖြစ်တယ်။
၁၉၉၂ ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ၁၁/၉၂ အမိန့်ကြေညာချက်နဲ့ အမတ်တွေအတော်များများ လွတ်သွားကြ တယ်။ ဦးဘပွားလည်း ထောင်ကလွတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့အမှုတွဲမှာပါတဲ့ အမတ်ဆရာဝန်တွေ အားလုံးကိုတော့ လွှတ်မပေးသေးဘူး။ သည့်အပြင် သူတို့အမှုတွဲတွေထဲက ဦးစောနေဒွန်း၊ ဦးလှထွန်း၊ ဦးမြ၀င်းနဲ့ ကိုကိုးကျွန်း ဦးလှသန်းတို့ မလွတ်သေးဘဲကျန်တော့တယ်။ သူတို့အမှုတွဲက ထောင်ထဲမှာ ကျန်သေးတဲ့လူတွေကလည်း အလွန်ကိုနည်းသွားပြီး နဂိုကတည်းက ရပ်တည်ချက်မခိုင်မာတဲ့ ဖော်ကောင်စိုးလင်းယောက် အတော်ကို လွတ်ကြောင်ကြောင်နေပြီ။ ထောက်လှမ်းရေးကလည်း အဲသည် ကာလအတွင်းမှာ စစ်ကြောရေးကလည်း ခဏခဏလုပ်နေတယ်။ ထောက်လှမ်းရေးနဲ့တွေ့တိုင်းလည်း စိုးလင်းတယောက်က လက်နက်ချ အညံ့ခံတာချည်းပါပဲ။ နိုင်ငံရေးကိုလည်း ဆက်မလုပ်တော့ပါဘူး၊ ထောက်လှမ်းရေးခိုင်းချင်ရာခိုင်းပါ၊ သူလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း အထက်ကိုလည်းဆက်လက်တင်ပြ ပေးပါဆိုပြီး လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ ထွက်ဆိုချက်တွေကို ပြလေ့ရှိတယ်။ ထောက်လှမ်းရေးတွေကလည်း နောက်လူတွေကို စစ်ဆေးမေးမြန်း စစ်ကြောလုပ်တဲ့အခါတွေမှာလည်း စိုးလင်းလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ ထွက်ဆိုချက်တွေကို ပြလေ့ရှိတယ်။ ဒီတော့ သူ့သတင်းက တိုက်ထဲမှာပြန့်နေပြီ။ ဒီတော့ လူငယ်အတော် များများကလည်း သူ့ကိုမလေးစားတော့ဘူး။ အခေါ်အပြောသိပ်မလုပ်တော့ဘူး။ စိုးလင်းကလည်း သူကိုယ်တိုင် လက်နက်ချအညံ့ခံရုံတင်မကဘူး၊ သူများတွေကိုလည်း လိုက်စည်းရုံးတယ်။ အပြင်ကို အမြန်ပြန်ရောက်ဖို့က အရေးကြီးတယ်။ ဒါကြောင့် ထောက်လှမ်းရေးစစ်ကြောရေးခေါ်ထုတ်ရင် သူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်း လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ဖို့ကို တိုက်ထဲမှာလိုက်ပြီး စည်းရုံးနေတယ်။ သူ့လိုပဲ စိတ်ဓာတ်မခိုင်မာသူတချို့ကတော့ နားယောင်ကြတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ လက်မခံကြပါဘူး။ ထောင်ထဲမ၀င်ခင်ကတည်းက သူဖော်ကောင်လုပ်ပြီး ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေကို ဒုက္ခပေးပြီးပြီ။ ခုလည်း ထောင်ထဲမှာ သူများတွေကိုပါ သူ့လို အညံ့ခံခိုင်းနေပြန်ပါပြီ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ အဘ၀တီ (NLD-CEC ဦးဝင်းတင်) ကတော့ Pholosophize မလုပ်ကြဖို့ လူကြီးတယောက်အနေနဲ့ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ပြောပါတယ်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ စစ်အစိုးရက တပ်မတော်ရွှေရတုအထိမ်းအမှတ်ဆိုပြီးတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးတင်ဦး၊ ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း ဦးကြည်မောင်တို့ကို လွှတ်ပေးရာမှာ ကျနော်တို့တိုက်ဝင်းထဲက ထောက်လှမ်းရေး ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း ဦးစိုးညွန့် (ကျောက်တံတားမြို့နယ်အမတ်) တို့နဲ့အတူ ဒေါက်တာ စိုးလင်းလည်း ပြန်လွတ်သွားပါတယ်။ စစ်အစိုးရက ထောင်ကလွတ်လာတဲ့ရှေ့နေတွေ၊ ဆရာဝန်တွေ လိုင်စင်အကုန် အသိမ်းခံရတယ်။ ဆရာဝန်ပညာ ရှေ့နေပညာနဲ့ လုပ်ကိုင်စားသောက်လို့မရအောင် ပိတ်ပင်ထားတယ်။ စိုးလင်းလည်း ဘာမှမလုပ်ကိုင် မစားသောက်တော့ဘူး။ နဂိုကတည်းက မျိုးစေ့မမှန် တော့ သူမိန်းမခိုင်းတာ အကုန်လုပ်တယ်။ နအဖစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီး ဖဲဝိုင်း၊ ဂျင်ဝိုင်း၊ နှစ်လုံး၊ သုံးလုံး လောင်းကစားဝိုင်းထောင်တယ်။ အမည်ခံတည်းခိုခန်းဖွင့်ထားတယ်။ မကောင်းတာတွေလုပ်နေပေမယ့် အဖမ်းမခံရဘူး။ ဖောက်သည်စစ်ဗိုလ် တွေက အကာအကွယ်ပေးထားတယ်။ ကျားကန်ပေးထားတယ်။ ထောင်ထဲက မကောင်းတဲ့အကျင့်အကြံ စရိုက်တွေနဲ့ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ပုလင်းတူဘူးဆို့ ကြောင်ခံတွင်းပျက်နှင့် ဇရက်တောင်ပံ ကျိုးတွေ အရိုးအရင်းကိုက်နေတာကို မြင်ကြရတဲ့ မန္တလေးမြို့မိမြို့ဖအပေါင်းက သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ အသည်းကြားကမဲပြားကို အလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ မျိုးမစစ် စိုးလင်းကို အော့နှလုံးနာလို့ မျက်နှာလွှဲလို့ထားကြပါတယ်။
ဦးဘပွားကလည်း ထောင်ကလွတ်ပြီး သိပ်မကြာဘူး အပြင်မှာပဲဆုံးတယ်။ အသက်ကလည်း အတော်ကြီး နေပြီး ထောင်ထဲမှာနေတုန်းကလည်း ကြမ်းပြင်သမံတလင်းပေါ်မှာ သည်အတိုင်းအိပ်ရတယ်။ ဦးဘပွားဆုံးတော့ သူ့ခေါင်းအုန်းအောက်က စာအိတ်တလုံးတွေ့ရတယ်။ စာအိတ်ထဲမှာ စာရွက်တရွက် ထည့်ထားတယ်။ အားလုံးကတော့ သေတန်းစာရေးခဲ့တယ်လို့ထင်ကြတယ်။ လူတွေအားလုံး လူစုံရာ ရှေ့မှာ ဖွင့်ဖောက်လိုက်တော့ “မအေ -ိုး ငါ -ိုးမသား၊ မျိုးမစစ် စိုးလင်း” လို့ရေးထားတယ်။ အညာသား မန္တလေးသားစစ်စစ်ကြီးဆိုတော့ သူတို့မြို့သားက ဖော်ကောင်ဘညွန့်လုပ်သွားတာကို အတော်လည်း ခံပြင်းနာကျည်းပြီး သေတဲ့အထိ အတော်ရှက်သွားပုံရတယ်။
မျိုးမစစ်စိုးလင်းကတော့ သူ့ကိုမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ မိခင်ပါတီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုတောင်မှ ပြန်ဆဲနေပါပြီ။ မျိုးမစစ်တဲ့ကောင်က ၀ံသာနုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ကို သူ့တပည့်ကလေကချေ လူ (၅) ယောက် (၆) ယောက်လောက်နဲ့ ဖွဲ့ထားလိုက်သေးတယ်။ မဲထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုမှ မထောက်ထားတော့တဲ့အပြင် ပြည်သူတွေရဲ့ အသွေးအသားတွကိုတောင် ဖဲ့ယူစားသောက်နေပါပြီ။ တတိုင်း တပြည်လုံးကပြည်သူတွေ ထမင်းငတ်နေတဲ့အချိန်မှာ စိုးလင်းတို့လင်မယားနှစ်ယောက်က ဖောက်သည် နအဖစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဆီကို သာကူးလုပ်ပြီး ထောင်ထဲကတန်းစီး၊ အခန်းလူကြီး ရာဇ၀တ် သားတွေရဲ့ ထောင်ကျင့်ထောင်ကြံပုံစံနဲ့ မျက်နှာချိုသွေး ပေါင်းသင်းနေလို့ တိုက်ဆောက်၊ ကားစီးနေရတာကို မစင်ပုံထဲက လောက်ကောင်တွေလို ပျော်နေကြတယ်။ ထောင်ထဲမ၀င်ခင်က ဖော်ကောင်လုပ် တယ်။ ထောင်ထဲမှာ လက်နက်ချအညံ့ခံတယ်။ ထောင်ကပြန်ထွက်လာတော့လည်း နအဖနဲ့ပူးပေါင်းပြီး မကောင်းမှု ဒုစရိုက်တွေလုပ်တယ်။ သည်လိုလူတယောက်က ၀ံသာနုနာမည်ခံထားသေးသတဲ့လား။ မျိုးချစ်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ မျိုးမစစ်တဲ့ မျိုးဖျက်ပဲဖြစ်မယ်။ သူလိုကောင်က မိခင် NLD ပါတီကို ပြန်ဝေဖန် ဆဲဆိုနေသေးတယ် ဆိုတော့ သူခိုးကလူဟစ်နေတာပေါ့။ အခုတော့ အဘပွားလည်း မရှိတော့ဘူး။ ကောင်းရာ သုဂတိနိဗ္ဗာန်ဘုံသို့လားပါစေ။ စိုးလင်းတယောက်ကတေ့ အရှင်လတ်လတ်မြေပဲမျိုမလား၊ မိုကြိုးပဲ အပစ်ခံရလေမလား။ အ၀ီစိချိုးကပ်မယ့် အဇာတသတ်အဖြစ်ကိုတော့ အဘပွားရေ တမလွန်ကနေ စောင့်သြာ ကည့်နေပေတော့။ ။
This entry was posted on April 9, 2015 at 1:43 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.